Nhau - Basa rechimbichimbi rinoshambidza mudziyo wekugeza ziso
Vazhinji vanhu vangangoziva chimwe chinhu nezve eziso washer, asi ivo havazive zvakawanda nezvavo. Yeyewash chishandiso senge rudzi rwekuchengetedza michina yekuchengetedza, mhando dzakasiyana siyana, inogona kushandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana, Bo Hua vagadziri vekushambidza maziso vanotsanangura zvakadzama basa rekukurumidzira kusuka mudziyo weziso.
Mune petrochemical zvinomera, zvipatara marabhoritari, zvikoro mumarabhoritari, ngarava dzezvikepe uye zvichingodaro, zvese hazvigone kupatsanurwa kubva kuchimbichimbi sukurudza mudziyo wekushambidza maziso, mudziyo wekushambidza maziso muChina hauna chiyero chakajeka, kunyanya uchishandisa American kana European standard. Emergency flushing eye yekugeza mudziyo inogona kudzora zvakanyanya zvinhu zvinokuvadza kukuvara kwemuviri. Kana makemikari kana zvinhu zvinokuvadza zvichimwayiwa mumuviri wemunhu kana maziso, iyo yekuwachisa ziso inogona kushandiswa mukukasira kuburitsa, izvo zvinogona kudzivirira nenguva kukuvara kune muviri wemunhu. Mushure mekutsvaira, iwe unofanirwa kutsvaga zano rekurapa nekukurumidza uye uteedzere nhungamiro yechiremba. Chete neakanaka chengetedzo yekudzivirira, hazvizokonzeresa zvisingagadzirisike zvikanganiso.
Bohua ziso rinosuka gadzira rinogadzira kugadzirwa kwemeso ekushambidza mudziyo kweanopfuura makore gumi, kuenderera mberi nekutsvaga uye kusimudzira hunyanzvi, kugadzirwa kweanoumba ziso kushambidza mudziyo, yemagetsi kupisa ziso kuwacha mudziyo, wehunyambiri ziso kugeza mudziyo, desktop ziso kuwacha mudziyo uye zvimwe zvakawanda. ziso rekugeza mudziyo, hunyanzvi hwekugadzira mainjiniya, inogona kuve inoenderana maererano nenzvimbo saiti.